Laba qof ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday Arizona Amtrak
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Laba qof ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday Arizona Amtrak
Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Xubno ka tirsan guddi hawleedka maandooriyaha ee gobolka oo ay ku jiraan mas'uuliyiinta maxalliga ah iyo kuwa federaalkuba, ayaa baaritaan joogto ah ku samaynayey tareen taagan marka toogashadu dhacday.
Saraakiisha fulinta sharciga ayaa kormeer joogto ah ku sameynayay tareenka Amtrak markii toogashadu dhacday.
Hal askari oo sharci fulin ah iyo qof la tuhunsan yahay inuu toogasho ku dhintay toogashada ka dhacday saldhigga tareenka Tucson.
Dhimasho iyo dhaawac midna lagama soo sheegin 137 rakaabkii tareenka ahaa iyo 11 shaqaalaha tareenka ah.
Toogasho ka dhacday gudaha tareenka Amtrak ayaa istaagay saldhigga tareenka ee Arizona halkaas oo ay ku dhinteen dad jiidhay laba kalena ay ku dhaawacmeen.
Mas'uuliyiinta fulinta hoose waxay raaceen tareenka Amtrak ee New Orleans-ka ku socda oo ka yimid Los Angeles wuxuu istaagay saldhig ku yaal bartamaha magaalada Tucson si uu u sameeyo baaritaan joogto ah oo loogu talagalay qoryaha sharci-darrada ah, daroogada iyo lacagta.
Saraakiisha fulinta sharciga ayaa laba qof kula kulmay heerka labaad ee tareenka laba-dabaq ah waxayna isku dayayeen inay xiraan mid ka mid ah, markii tuhmanaha uu la soo baxay qori gacmeed oo uu rasaas ku furay.
Is -rasaaseyntaas waxaa ku dhintay hal wakiil oo ka tirsan Maamulka Fulinta Daroogada (DEA), waxaana ku dhaawacmay wakiil kale oo xaaladiisu aad u liidato. Sarkaal ka tirsan booliiska Tucson oo u soo gurmaday ka dib markii uu maqlay rasaas la riday ayaa isna dhaawacmay, laakiin xaaladiisu way wanaagsan tahay.
Ka dib markii ay is -weydaarsadeen rasaas askarta, qofka wax toogtay ayaa isku soo xiray gudaha musqusha tareenka. Ugu dambayntii, wakiilada fulinta sharciga ayaa go’aamiyay in qofka laga shakisan yahay ee suuliga ku jira uu dhab ahaantii dhintay. Ma cadda xilligan in wakiiladu ay toogteen iyo inuu naftiisa dilay.
Wax dhaawac ah lama soo sheegin 137 rakaab ah iyo 11 shaqaale ah oo saarnaa doonta Amtrak tareenka laga raray saldhigga.
Eedeysanaha koowaad oo markii hore la xiray ayaa weli ku jira gacanta booliska. Ma jirto cid laga shakisan yahay oo ay hay'adaha fulinta sharcigu aqoonsadeen.